Aabbaha wiilka Suuriyaanka ah oo BBC u warramay - BBC News Somali
Aabbaha wiilka Suuriyaanka ah oo BBC u warramay
3 Sebtembar 2015
Abdullahi Kurdi oo ah aabbaha wiilka ku dhintay xeebta Turkiga ayaa BBC u sheegay inuu doonayay inuu arko ilmahiisa markii ugu dambeysay oo uu la joogo, lana fariisto ebid.
Waxa uu sheegay in uu xasuusto qofka tahriibka u sameynayay ee muqalaska ahaa inuu kaxeeyay oo uu baray nin Turkish ah, kaddibna ay doonta fuuleen. Waxa uu yiri waxaan ahayn 12 qof marka lagu daro darawalka.
"Waxaan soconnay 4 ama 5 daqiiqo, kadibna darawalkii ayaa arkay mowjadaha inay aad u weyn yihiin, waxaana uu ka booday doonta isaga oo baxsaday."
Waxaan isku dayay inaan doonta leexiyo laakiin waxaa gediyay mowjad xoog badan. Taasi waxay ahayd markii dhacday arrintu. Waxaan isku dayay inaay qabto ilmahayga iyo xaaskayga laakiin wax rajo ah ma jirin. Mid mid ayay u dhinteen.
Image caption Abdullah Kurdi waxa uu ka warramay sida ay ilmihiisi iyo xaaskiisi ugu dhinteen badda
Ilamahaygu waxay ahaayeen kuwa ugu quruxda badan caalamka. Ma waxaan jirin qof ilmihiisu aanay u ahayn waxa ugu qiimaha badan? Waxay ahaayeen ilmahaygu kuwo cajiib ah. Maalin walba ayay ii kicin jireen inaan la cayaaro. Maxaa ka qurux badan taas. Wax walba waa ay tageen hadda.
Waxaan jeclahay inaan ag fariisto qabriga qoyskeyga oo aan ku dejiyo xannuunka aan dareemayo.